Awoodda Ducda Iyo Beryada! – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Awoodda Ducda Iyo Beryada!
Awoodda Ducda Iyo Beryada!
Markii uu muddo badan Allah (sw) ka barayay inuu siiyo gabadh wanaagsan oo uu guursado, ayuu markii danbe guursaday gabadh. Muddo markii ay wada noolaayeen ayay aad ugu xumaatay , muu niyad jabin laakiin haddana baryadiisa ayuu sii waday isagoo u adkaysanayay dhibteeda.
Isagoo weli xaaladaasi adag ku jira ayaa markii uu sanad qabay iyadu ka codsatay inuu iska furo, isaguna waa uu ka aqbalay , markii uu furay ayu dareemay culaysa ka degay.
Muddo yar ka dib waxa uu haddana guursaday gabadh kale, waxa ay ahayd mid astaamihii uu Allah weydiistayoo dhan wada leh, iyadoo weliba intii Allah uu weydiistay ay ka sii badnaayeen sifaadka aya lahayd.
Markii uu arkay wanaageed ayu si fiican u xejistay oo uu dareemay in ducadii laga aqbalay iyo nimcada gabadha wanaagsan. Waa xikmadah Allah (sw) , haddii aanu gabadhii hore soo arag may dhacdeen inuu dareemo wanaagga gabadhan danbe, waxa ay ahayd tababar Allah siiyay. Weliga ducda iyo beryada Allah haka quusan hana joojin, hana degdegsan.
Previous articleDal Horumar Ku Gaadhay Ka Faa’iidaysiga Wakhtiga!
Next article48 Arday oo ku Dhaawacmay Dab ka Kacay Dugsi ku yaal Hargeysa